Ikhaya leHolide "Am Wiesengrund" eDüben Heath - I-Airbnb
Ikhaya leHolide "Am Wiesengrund" eDüben Heath
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKarsta
Iindwendwe ezithandekayo, wamkelekile ngokufudumeleyo kwindlu yethu yelizwe epholileyo e-Dübener Heide engekude nedolophu entle yaseRainessance yaseTorgau. Ikhaya leeholide likunika amagumbi anqabileyo okuphumla kunye nokucotha, ingqalelo enkulu kwiinkcukacha, ezilungiselelwe kwisitayile sabazukulwana bethu. Isitiya sikwasetyenziselwa kuphela, njengesakhiwo esikufuphi sokugcina iibhayisekile, njl njl. Indawo yethu esembindini ikunika amathuba amaninzi ohambo, umz. ukuya eTorgau, Leipzig, Wittenberg, Berlin naseDresden.
Ikhaya lethu leholide likubuyisele kwiintsuku ezimnandi zakudala. Siyinike ngothando indlu yelizwe kwisitayile sikamakhulu nootatomkhulu bethu kwaye kuye kwavela amagumbi apholileyo. Apha unokulibala ubomi bemihla ngemihla kwaye ubeke idayari yakho ecaleni. Nangona kunjalo, asikhange sijonge kwizinto zanamhlanje kwaye unokubukela iTV kwiscreen esikhulu esisicaba. Igumbi lokuhlambela lineshawa ebanzi kwaye engenazithintelo. Kubantwana abancinci, sinokubonelela ngebhedi yokuhamba, itafile yokutshintsha kunye nesihlalo esiphezulu xa siceliwe.
Kude kude nekhaya leeholide kukho amahlathi kunye namadlelo anebhayisekile kunye neendlela zokuhamba. Apha ungaphumla kwaye ufumane umoya omtsha. Kodwa iihambo azihoywa nazo, kuba unokufika eTorgau ngemizuzu eli-10, eLeipzig ngeyure enye, eWittenberg kwiiyure ezi-1.5 kunye naseBerlin naseDresden malunga neeyure ezi-2.
Umbuki zindwendwe ngu- Karsta
Ngokuqinisekileyo sihlala sonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo. Siyavuya ukunikezela isitshixo ngokobuqu kwaye sichaze iinkcukacha ezimbalwa ezibalulekileyo malunga nendawo yokuhlala. Ukuba ixesha alivunyelwanga, siya kulungiselela ukuba omnye umntu anikezele izitshixo. Ngaphandle koko sishiya iindwendwe zonke inkululeko.
Ngokuqinisekileyo sihlala sonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo. Siyavuya ukunikezela isitshixo ngokobuqu kwaye sichaze iinkcukacha ezimbalwa ezibalulekileyo malu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dreiheide